Izindatshana Zokudoba Nezokudoba Fisher Point - Izesekeli
8:40 am - 12:30 pm / 16:30 pm - 19:20 pm
Izesekeli zokudoba ziphakathi kokuphambili izimpahla etholakala ku- I-Fisher Point, umthengisi ovela edolobheni Messina, enikeza imikhiqizo engcono kakhulu ye nautical futhi i ukudoba imidlalo, izingubo ezithile ezihlomile kanye nazo zonke izinhlobo umhlanga e izihlwathi lemikhiqizo efunwa kakhulu.
Izindatshana Zokudoba Zokudotshwa kwe-Fisher Point nezesekeli: inketho ebanzi kumdlalo owuthandayo
Izihloko e izesekeli da ukudoba I-Fisher Point itholakala ku- Messina, Torre Faro ndawo: kule shop uzothola imikhiqizo ye bonke abalandeli bomkhakha. Ukuthi eyakho iyinto yokuzilibazisa noma uthando lwangempela emazingeni wokuncintisana, kusuka Fisher Point uzothola zonke izinhlobo ze Article o Isesekeli, izembatho ezikhethekile ezingena-Windproof, izinto ze izikebhe e imigqa yokudoba kwanoma yikuphi ukushuba nesisindo ngamanani angabizi kakhulu emakethe.
I-Fisher Point iminyaka engaphezu kwengu-20 eMessina iphuzu lakho lokubhekisela kubathandi bezokudoba
Wazalwa ngo-1998, isitolo izimpahla e izesekeli for the ukudoba I-Fisher Point isikhungo ezitolo zedolobha Messina. E-Fisher Point zonke izidingo zokuthengwa, zombili ngamazinga ezemfundo nezobuchwepheshe, zizothintwa futhi zithokoziswe ngabasebenzi bethu: konke okuhle izimpahla kusuka emhlabathini o phesheya kwezilwandle, imishini ngaphansi kwamanzi nazo zonke izinhlobo ze isheyini, phila noma zepulasitiki, uzohlongozwa kuwe ngabasebenzi abanekhono abazokweluleka kangcono ukuthi wanelise zonke izicelo zakho nezidingo zakho. Phakathi kwemikhiqizo ebalulekile embozwe uzothola: UShimano, uFalcon, uMadead, u-Okuma nabanye abaningi.
Izinto zokudoba olwandle olujulile nezinye izinto zesikebhe sakho kusuka eFisher Point kuya eMessina
I-Fisher Point akayedwa ukudayiswa al imininingwane di izimpahla ed izesekeli for the ukudoba amateur, eqinisweni, lesi sitolo esigcwele kahle sikhuluma ngokuthengiswa kwe izesekeli for the ukudoba olwandle olujulile, okudinga okhethekile ukugoqa okujikelezayo for the ukunyathela ezikebheni. Lo mkhuba okhethekile nawo uyadingeka imigqa yokudoba mkhulu futhi isikhathi eside, izesekeli for the ukuskena kwasolwandle e indawo ukuthola kabusha impango yakho.
Insizakalo yasekhaya nokuhanjiswa kwezwe lonke: IFisher Point iyasebenza kulo lonke elase-Italy
Phakathi kwemisebenzi eminingi enikelwe ngalokhu umthengisi wezitolo di Izihloko e izesekeli da ukudoba, kukhona futhi a isevisi a domicile anikezelwe edolobheni lase Messina futhi a isevisi di uhambo izinga kuzwelonke. Ama-oda wakho azocubungulwa ngokushesha ngesikhathi esifushane kakhulu, ngaso sonke isikhathi aqinisekisa ikhwalithi yezimpahla njengokungathi zithengiwe esitolo kanye nokulethwa ngesikhathi.
Ikheli: Nge-C Pompea, 1735
I-POSTAL CODE: 98165
Umakhala ekhukhwini: 334 3270805
Umakhala ekhukhwini: 349 1461030
Inombolo ye-VAT: 02101320832